China Pump Rubber Front Liner Wear Parts orinasa sy mpamatsy | YAAO
Rehefa pumping slurries abrasive dia tsy fanontaniana raha mila tahiry pump slurry ianao ary mitafy faritra - fanontaniana ny hoe rahoviana. Miaraka amin'ny rafitra miharo tanteraka sy ny vahaolana amin'ny famatsiana loharano tokana dia manatsotra ny lisitra, ny fizarana ary ny fametrahana ny pompe slurry izahay ary ny tahiry hitazomana ny fizotran'ny mpanjifanay maharitra, azo antoka ary mahomby kokoa.
YAAO dia manamboatra ny faritra soloina slurry pump izay soloina tanteraka ho an'ny Warman sy ireo faritra pump pump slurry OEM hafa.
Ny ampahany amin'ny paompy slurry dia azo sokajiana ho faritra lehibe telo: ny faritra mando paompy, ny ampahany amin'ny fametahana tombo-kase, ny fizarana familiana fiara, noho izany dia voasokajy arak'io fisainana io ny ampahany amin'ny paompin-tsinay.
Ny fandrafetana an'i Tobee dia tranokala miorina amin'ny havoana, miaraka amina endrika, fikarakarana lamina, famolavolana, fanariana, fitsaboana hafanana, fametahana milina ary fivoriambe. Azontsika atao ny manome toky ny mpanjifa fa mifanaraka tsara rehefa apetraka ao anaty frame misy efa misy ny ampahany ary hiasa amin'ny alàlan'ny mekanika sy hydraulika toa izay noforonin'ny OEM.
YAAO dia manolotra karazan-paompy slurry isan-karazany ao anatin'izany ny impellers, volute liner, bush bush, frame plate liner insert, expellers, pump case, bear assembling sns.
Ny faritra mando vita amin'ny kodiarana dia fanoherana mahery vaika sy fanoherana ny harafesina, matetika ampiasaina amin'ny fepetra miasa asidra. Toy ny fanodinkodinana amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, slurry misy poti kely ary tsy misy sisiny matevina. Ny ampahany amin'ny famindran-toerana dia misy ny Cover Plate Liner, ny lozam-pifamoivoizana, ny lozisialy takelaka, ny sisin-tsoratry ny takelaka vita amin'ny takelaka. Ireo kojakoja vita amin'ny fingotra dia vita amin'ny Natrual Rubber, kaody R55 sy R38, izay manome antoka ny fahombiazana ao anatin'izany ny fanoherana, ny fanoherana ny simika, ny hafanana ary ny maripana avo lenta avy amin'ny -40-75.
Ny refy Rubber impeller dia mitovy amin'ny High Chrome Alloy Impeller. Afaka nanolotra Pump Rubur Slurry Pump tamin'ny Metal Impeller ihany koa izahay. Impeller no ampahany lehibe indrindra amin'ny paompy slurry Centrifugal. Ny paompy centrifugal dia mila impeller hamokarana ny hery sentrifugal izay manodina ireo slurries. Ny hery centrifugal dia ateraky ny impeller rehefa mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha iray izy.